Tababaraha Chelsea Tuchel oo shaaca ka qaaday inuu doonayo hal boos oo muhiim ah in la xoojiyo bisha Janaayo | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Tababaraha Chelsea Tuchel oo shaaca ka qaaday inuu doonayo hal boos oo...
Tababaraha Chelsea Tuchel oo shaaca ka qaaday inuu doonayo hal boos oo muhiim ah in la xoojiyo bisha Janaayo
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa qirtay inuu soo iibsan karo xidig ka ciyaara garabka midig.
Tuchel wuxuu iftiimiyay inuu heysto hal ciyaaryahan oo kaliya oo ku haboon garabka midig halka Reece James laga yaabo inuu ku ciyaaray.
Tuchel ayaa yiri, “Haddii aan ka ciyaarno daafaca dambeedka, waa Azpi, haddii aan ku ciyaarno afar-dambe, baahida loo qabo waxaa laga yaabaa in xoogaa difaac buuxa ah oo leh astaamo kala duwan si loo ilaaliyo ciyaartoyda weerarka ah, sidoo kale waa Azpi. Waxa uu noqon karaa Trevoh Chalobah laakiin waxa uu ku maqan yahay dhaawac.
“Sidaas darteed waxaa naga dhamaaday xulashooyinkii, haddii aad ka hadasho Christian Pulisic ama Callum Hudson-Odoi , hubaal waxay ciyaari karaan kaliya garabka daafaca . Ma ahan booska ay doorbidayaan mana soo bandhigi karaan awoodooda buuxda haddii ay halkaas ku ciyaaraan, waxaana hubaal ah inaysan ciyaari karin daafac buuxa.
“Sidaas darteed waxaad luminaysaa fursadaha ma aha oo kaliya laakiin sidoo kale xeeladaha iyo qaabka. Taasi waa sababta aan u eegno suuqa oo aan hubinno ikhtiyaarradayada, laakiin dhamaadka waxay u baahan tahay inay macno sameyso.
“Haddii aan haysano koox buuxda, waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho waxba kama qabaneyno suuqa kala iibsiga sababtoo ah kaliya waan ku faraxsanahay, laakiin waxaan heysanaa arintaan, waana sababta aan u eegeyno waxa suurtagal ah.”
Erik ten Hag oo Sharaxay Muhiimada ay leedahay maamulka Qolka labiska...
Tababaraha soo socda ee Manchester United Erik ten Hag ayaa sheegay inay muhiim tahay inuu awoodo inuu “maamulo qolka labiska” ee Old Trafford...
Lazio oo aad u Dooneysa xiddiga Chelsea Ruben Loftus-Cheek?
Man United iyo Arsenal oo Real Madrid kula dagaalami doona...
Maxaa kasoo kordhay xiisihii ay Real Madrid ma xiiseyneyso u qabtay...
Manchester City oo isha ku haysa daafaca reer Brazil ee Abner...
Xildhibaano ‘loo diiday’ inay galaan xerada Afisyoone
Kuraastii ugu horreysay oo maanta lagu doortay Baraawe – Yaa kusoo...
Qoor qoor Iyo Cali Guudlaawe oo Damacsan In Ay Kuraasta Xildhibaanada...
Horudhac: Juventus Vs Hellas Verona ee Horyaalka Serie A Italy, Wararka...